Xildhibaan Abwaan Cabdirashiid oo ku taliyay in la adkeeyo qodobada ciqaabta ee xeerka kufsiga Puntland – Kalfadhi
April 11, 2019 April 11, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Xildhibaan Cabdirashiid Yusuf Jibriil oo ka mid ah guddiga hawlaha guud, ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee golaha wakiillada Puntland ayaa si adag u cambaareeyay fal kufsi iyo dil isku jira ah oo shalay ka dhacay Garowe.
Xildhibaan Cabdirashiid oo la hadlay warbaahinta arrimaha baarlamanka ee Kalfadhi ayaa sheegay in loo baahan yahay in si adag loo dhaqangeliyo xeerarka iyo shuruucda ka deggan jarriimooyinka noocaas ah.
Booliska ayaa shaaciyay in shalay gurigeeda loogu dhacay, la kufsaday isla markaasna la dilay gabar xaamilo ah oo degganayd xaafadaha Bari ee Garowe, iyadoo aan la ogayn raggii ka dambeeyay falkaas.
Baarritaanno ayay boolisku weli ku wadaan kiiskan.
Wuxuu sheegay in kufsiga sii kordhaya ee Puntland uu yahay arrin aan la sii eegan karin oo aad uga fog diinta islaamka iyo xeerarka u yaala dowladda Puntland.
“Waxaan ku talinayaa in dib u eegis lagu sameeyo xeerkii hore ee kufsiga isla markaasna la adkeeyo ciqaabta” ayuu yiri Xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yusuf Jirbiil.
Golaha wakiillada Puntland ayaa hore ugu baaqay in odoyaasha dhaqanka ee beeluhu ay faraha kala baxaan kiisaska la xiriira kufsiga, si dambiilayaasha ay ku caddaato loo waafajiyo shareecadda islaamka iyo xeerarka kufsiga uga degan Puntland.